တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများမှ Izmir သို့တစ် ဦး က Plus တက္ကသိုလ်စီးတီးခေါင်းစဉ် RayHaber | raillynews
[19 / 02 / 2020] YHT Bolu ပူဖောင်းအကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်	14 Bolu
[19 / 02 / 2020] Tunç Soyer ကို Izmir စက်ဘီးစီးသူများကိုချီးမြှင့်သည်	35 Izmir
[18 / 02 / 2020] Samsunspor ထောက်ခံသူမနက်ဖြန်အခမဲ့ဓါတ်ရထား	55 Samsun
[18 / 02 / 2020] Ankara Metropolitan မှ Metro အတွက်ယဉ်ကျေးစည်းကမ်းများကိုမျှဝေခြင်း	06 တူရကီ
[18 / 02 / 2020] 25 တူရကီအတွက် Start ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာမှ9Operating လှုပ်ရှားမှုများစီစဉ်ထား	06 တူရကီ
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 Izmirတက္ကသိုလ်စီးတီးခေါင်းစဉ်ကနေ Plus အားအဆိုပါ Izmir တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား
29 / 07 / 2018 35 Izmir, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, တူရကီ
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, AAA အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအကြွေး rating အေဂျင်စီ၏အောင်မြင်မှုကိုညွှန်ပြမှတ်စုကို ယူ. , ကောလိပ်ကျောင်းသားများ + မှဤအချိန်မှတ်စုများကိုယူ။ ပြည်နယ် 81 ဓာတ်ခွဲခန်း "ကျောင်းသား-Friendly မြို့ကြီးများ" စစ်တမ်းများတွင်တက္ကသိုလ်ကကောက်ယူသုတေသန Izmir, ကျောင်းသားများအဆင့်မြင့်မျှော်မှန်းချက် "Plus အား" အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်တွေ့ဆုံရန်။
တက္ကသိုလ်သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း (Unior) တူရကီအတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်နှင့် "တူရကီတက္ကသိုလ်ကျေနပ်မှုစစ်တမ်းဖို့" တက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံအပေါ်ကျယ်ပြန့်ရှုထောင့်ကမ်းလှမ်း (Tuma) Izmir မှတ်သားခဲ့သည်။ Izmir တဲ့ Metropolitan သည့်မြူနီစီပယ် Izmir ၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှု application ရဲ့လမ်းကြောင်း၏ "တက္ကသိုလ်တစ်မြို့ဖြစ်ခြင်း" အသုံးပြုပုံ 81 ကျောင်းသားများကို '' မျှော်မှန်းချက် "Plus အားတက္ကသိုလ်စီးတီး" ၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုတွေ့ဆုံကြောင်းသုတေသနအတွက်ပြည်နယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ-Friendly တက္ကသိုလ်မြို့ကြီးများ (Odusan) တွင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်ရောက်ခဲ့သည်ခေါင်းစဉ်ကိုယူ။
Plus အား: အလွန်မြင့်မားကျေနပ်မှု
သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများနှင့်တူရကီအတွက်ဘွဲ့ကြိုအဆင့်မှာလေ့လာနေကျောင်းသားစိတ်ကျေနပ်မှုကိုနားလည်, Odus 2018 အစီရင်ခံစာ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပြင်ဆင်ထားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မွန်တီနီဂရိုးနှင့်ပါမောက္ခပီတာ ဒေါက်တာ Cemil အတွင်းပိုင်း Yucel တက္ကသိုလ်သုတေသနဓာတ်ခွဲခန်း (UNICE) ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, တူရကီကျောင်းသား-Friendly တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျေနပ်မှုစစ်တမ်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်းမြို့တော်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ 81 109 63 ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်များနှင့်ရိုးအမြစ်များတွင် 172 26 513 တထောင်လေ့လာနေသုတေသနအချက်အလက်များ, ကျောင်းသားများကိုမှရရှိသောခဲ့ကြသည်။ သုတေသနမြို့ဘေးကင်းလုံခြုံ, ဖျော်ဖြေရေး, ယဉ်ကျေးမှု, အနုပညာ, အားကစား, tradesmen ဆက်ဆံရေး, ထိုကဲ့သို့သောသူတို့သင်ယူကျောင်းသားများကိုတိုင်းတာခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်မြို့အဘို့စိတ်ကျေနပ်မှု၏ပြဿနာဖြေရှင်းရေးအဖြစ်ကျောင်းသားများ, ခရီးသွား, လူမှုရေး, အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များနှင့်ကျန်းမာရေးကိစ္စများဆီသို့ဦးတည်လူရဲ့သဘောထားကိုခံစားရတယ်, မကောင်းသောရခြင်း၏ Umeda သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦကို run ခဲ့သည်။
မြို့ "အလွန်မြင့်မားသောကျေနပ်မှု Chilling မြို့ကြီးများ", "အမြင့်ကျေနပ်မှု Chilling မြို့ကြီးများ", "ကျေနပ်မှု Chilling မြို့ကြီးများ", "ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝမဟုတ်သည့်မြို့ကြီးများပေး", "ကျေနပ်မှုအနိမျ့Olduðuမကျေနပ်မှုကကုန်ကျစရိတ်မတတ်နိုင်မြို့ကြီးများ", "မကျေနပ်မှုကအမြင့်Olduðuမြို့ကြီးများ A +" "ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်" မှတ်ချက်ပြု "တစ်", "B က", "ကို C", "D:" နှင့် "FF" အက္ခရာများအချက်များကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ A + (Plus အား) အသီးသီးရွေးချယ်ထားသည့်မြို့ကြီးများ5Antalya, Izmir, eskisındıနာရီ, EDI RNA နှင့် Mugla ဖြစ်ခဲ့သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် 90 မိနစ်အားသာချက်
တက္ကသိုလ်မြို့တည်ဆောက်ရန် Izmir ၏ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အပြည့်အဝအမှတ်အသားများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ Izmir ဖို့ရွေးချယ်? ဒီမှာအဓိကအကြောင်းအရာများနေသောခေါင်းစဉ်:
Izmir ဒီ feature ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့ထင်ဟပ်စေတဲ့ခေတ်မီသောမြို့ဖြစ်၏။ Izmir သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကျောင်းသားများကိုအတွက်အလွန်အဆင်ပြေကြောင်းအထူးသဖြင့်နေရာတစ်နေရာ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Izmir အတွက်လျှောက်လွှာမသာ, ကျောင်းသားများအတွက်အထူးသဖြင့်အလွန်ကြီးစွာသောအားသာချက် "အခမဲ့ခရီးသွားလာ၏တစ်ခုတည်းသောလက်မှတ် 90 မိနစ်" ။ လူငယ်များအရောင်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ပျော်စရာİzmirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်းနိုင်ပါ။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုမြို့အသစ်ရောက်ရှိလာသော, riliy သက်ဆိုင်ရာဟုခေါ်တွင်စေနိုငျသောအသင်းများနှင့်ကျောင်းများ၏မြို့တော်မြူနီစီပယ်ခြင်းအားဖြင့်ဘတ်စ်ကားဘူတာရုံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, သူတို့ရဲ့အိပ်ဆောင်အောင်မြင်ရန်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ အများပြည်သူမြို့ပြလူမှုစီမံကိန်းများတွင်ပိုမိုလွယ်ကူဖျူးတက်ကြွစွာပါဝင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများ, လူမှုရေးတာဝန်ယူမှုယူဆ။ သို့သော်အပေါင်းတို့၏အရေးအပါဆုံး, သည်းခံစိတ်၏ Izmir ရာသီဥတု။
တင်ဒါအသိပေးချက် - အစားအစာ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူလိမ့်မည် (YHT Business Plus နှင့် Economy Plus …
Sandalci FIATA ဂုဏ်ပြုကော့စတာရီ၏အဖွဲ့ဝင်များ၏ခေါင်းစဉ်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်
Metro High School တွင်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်စာအုပ်ဖတ်ရှုရန်ကင်ပိန်း
သူငယ်တန်းကနေကျောင်းသားများသည် sensitivity ကို izban ခေါ်ရန်
Izmir Selected တစ်နှစ်တာ၏အပျော်ရွှင်ဆုံးစီးတီးဖြစ်ပါသည်
BUFA Gelcoat Plus အား GmbH သည် Co. , KG
Pegasus Plus အား '' tan 1 သန်းတန်ဖိုးရှိ FlightPoint လက်ဆောင်ပေးမယ်
က M-Presse ပေါင်း SRO
Plus အား ZLH AS
ရထားလမ်းစနစ်များလုပ်ဆောင်ချက်: Plus အား 2013 ausrail - ဆစ်ဒနီ
TEMSA Safir Plus အားထံမှ Kamil Koç 40
ပြည်ပမှာ Pegasus Plus အားအဖွဲ့ဝင်များနှင့် 30 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေးပျံခုနှစ်တွင်အဆုံးနေ့ရက်များအဆုံး
AusRAIL Plus တရားမျှတရေးနှင့်ညီလာခံ
Bolen Sakarya စီးတီးမီးရထားလိုင်းအတွက်တက်ဖြစ်
အဆိုပါ Stop နာကိသုİzbeမှာလှေကားလမ်းလျှောက်နေစဉ်သူတို့ကထိုသို့ပြုကြသည်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇူလိုင်လ 30 1869 Rumeli ရထားလမ်း
25 တူရကီအတွက် Start ကိုထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးရေးစင်တာမှ9Operating လှုပ်ရှားမှုများစီစဉ်ထား